‘Tinoda maticha eEcd 15 000’ | Kwayedza
13 Apr, 2018 - 00:04	 2018-04-12T19:00:27+00:00 2018-04-13T00:05:01+00:00 0 Views
GURUKOTA redzidzo yepuraimari nesekondari, Professor Paul Mavima, vanoti Zimbabwe inoda varaidzi vanosvika 15 000 veEarly Childhood Development (ECD) kuitira kuti vakwanirane nehuwandu hwevana.
Vakataura mashoko aya nguva pfupi yadarika mudare reSenate apo vaipindura mubvunzo wemumiriri weMasvingo, Senator Misheck Marava.
Sen Marava vaida kuziva matanho ari kutorwa neHurumende mukupinza mabasa varairidzi vakadzidzira basa vari kubva kumakoreji nemayunivhesiti.
“Mutemo unoti kudii maererano nekupinzwa basa kwevakapedza zvidzidzo zvehurairidzi kumakoreji nemayunivhesiti nekuti tiri kuona vakawanda vavo vachingombeya mumigwagwa?” vanodaro.
Prof Mavima vanoti varairidzi vari kunyanya kudiwa pari zvino ndeveECD.
“Ndinovimba bazi redu rakazivisa kuti tinoda varairidzi 15 000 veECD kuti tinge tichishanda zvakanaka. Tinodawo vashoma padanho repasi reGrade 3 kusvika 7 iro tine varairidzi vakati shomekei.
“Kuzvikoro zvesekondari, tinoda varairidzi vezvidzidzo zvakaita seScience, Physics, Mathematics uye Biology neChemistry zvine varairidzi vangangoringana.
“Asi kana pari panyaya yeEDC, munoziva kuti gurukota rehomwe yenyika pavakatura hurongwa hwebhajeti renyika regore rino vakati Hurumende haina mari pari zvino nekudaro hatikwanise kunge tichitora varairidzi vatsva. Pamusoro pezvo, hapanai vamwe vanhu vari kupinzwa basa muHurumende pari zvino,” vanodaro.
Prof Mavima vanoenderera mberi vachiti, “Patiri kukwanisa kutora varairidzi pari zvino ndeapo patinenge tichitsiva vanenge vasiya basa, vaenda pamudyandigere kana kuti pane anenge afa. Tinotorawo zvakare varairidzi vanenge vachidiwa zvakanyanya seveMathematics, Physics nevezvidzidzo zveSainzi.
“Ndinoda kuti dare rino rizive kuti isu tinongotaura huwandu hwematicha atinenge tichida asi bazi rehomwe yenyika ndiro rinozopa mvumo yekuti tichivatora uye kupinzwa kwavo basa kunoitwa nePublic Service Commission.”
Sen Marava vanobvunza zvakare kuti ko vamwe varairidzi vari kutsvaga basa vakaita seveEnglish vangaitawo sei sezvo vachida kurarama?
Prof Mavima vanoti iri idambudziko rakatarisana nenyika yose rekushaikwa kwemabasa.
“Aya ndiwo mamiriro ezvinhu, kune vadzidzi vakawanda vari kupedza fundo yavo vasiri kukwanisa kuwana mabasa. Senyika, tinofanira kutsigira zviri kuitwa nemutungamiriri wenyika President (Mnangagwa) mukuvandudza upfumi hwenyika kuitira kuti pakave neshanduko munyaya dzeupfumi, tinokwanisa kupinza varairidzi mabasa.
“Mamiriro ezvinhu aya ari kubatawo vakapedza zvidzidzo zvehukoti avo vasiri kukwanisa kupinzwa mabasa,” vanodaro Prof Mavima. Vanoti imwe nzira yekupedza dambudziko iri kutarisa zviri kuitwa nedzimwe nyika dzine vanhu vakawanda vakadzidzira mabasa seCuba.
“Nyika idzi dzinotaura nevamwe pasi rose uko dzinokwanisa kuendesa vakadzidzira mabasa akasiyana avo vanenge vasina kukwanisa kuwana basa munyika mavo. Isu tiri kubatsirikana senyika kuburikidza nemachiremba anobva kuCuba, kana muchizvirangarira Cuba iri kutumira madhokotera ayo kunyika dziri pasi rose,” vanodaro Prof Mavima.